International tourism down 83% in the first quarter of 2021 | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Njem njem mba ụwa gbadara 83% na nkeji iri abụọ na mbụ nke 2021
A na-ahụ ọgwụ mgbochi dị ka ihe dị mkpa maka mgbake nke ụlọ ọrụ ndị njem njegharị ụwa site na ọrịa mgbasa COVID-19.
Asia na Pacific gara n'ihu na-ata ahụhụ dị ala nke ọrụ njem nleta mba ụwa
Europe dekọtara nke abụọ kachasị na njem mba ụwa na -83%
Atụmatụ mgbake njem mba ụwa maka oge May-August na-emewanye nke ọma
N’agbata onwa Jenụwarị na Machị 2021, ndị njem mba ụwa, nabatara nde mmadụ 180 pere mpe ma e jiri ya tụnyere nkeji mbụ nke afọ gara aga.
Asia na Pacific gara n'ihu na-ata ahụhụ kachasị ọrụ yana nsonye 94% na ndị mbata mba ofesi n'ime ọnwa atọ.
Europe dekọtara ọnụ ọgụgụ nke abụọ kachasị na -83%, nke Africa (-81%), Middle East (-78%) na America (-71%) sochiri.
Ihe a niile sitere na 73% daa na ndị njem njem mba ụwa zuru ụwa ọnụ edere na 2020, na-eme ya afọ kachasị njọ na ndekọ maka mpaghara ahụ.
Nnyocha e mere ọhụrụ gosipụtara atụmanya maka oge May-August ka ọ ga-adịwanye mma. N'akụkụ nke a, usoro ịgba ọgwụ mgbochi na ụfọdụ ahịa ahịa isi yana atumatu iji malitegharia njem nlegharị anya, ọkachasị EU Digital Green Certificate, emeela ka olileanya nwee ike ịlaghachi na ụfọdụ ahịa ndị a.
Na mkpokọta, 60% na-atụ anya ịlaghachi na njem njem mba ụwa naanị na 2022, site na 50% na nyocha Jenụwarị 2021. Ihe fọdụrụ na 40% na-ahụ ikike ịlaghachi na 2021, agbanyeghị na nke a dị ntakịrị site na pasent na Jenụwarị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị ọkachamara anaghị ahụ nloghachi na njem nlegharị anya nke mba ụwa na 2019 tupu 2024 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ebe pasent nke ndị zaghachiri na-egosi ịlaghachi n'ọrịa na-efe efe na 2023 belatara (37%), ma e jiri ya tụnyere nyocha Jenụwarị.
Ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nleta na-arụtụ aka na mmachi mgbochi mmachi njem na enweghị nhazi na usoro iwu na ahụike dị ka isi ihe na-egbochi mpaghara mpaghara.
Mmetụta nke COVID-19 na njem na-ehichapụ mbupụ ụwa niile site na 4%
Ọnọdụ akụ na ụba nke ọrịa a na-efe efe dịkwa oke egwu. Nnata nke njem njem mba ofesi na 2020 jụrụ 64% na ezigbo okwu (ego mpaghara, ọnụ ahịa mgbe niile), nke ya na ihe ruru ijeri US $ 900, na-ebelata ọnụ ahịa mbupụ zuru ụwa ọnụ karịa 4% na 2020. Mfu zuru ezu na ego mbupụ site na njem ndị mba ụwa (gụnyere njem ndị njem) ruru ihe ruru ijeri US $ 1.1. Asia na Pacific (-70% na ezigbo okwu) na Middle East (-69%) hụrụ oke mmiri na ego.